Waxaan nahay baloog loogu talagalay wararka suugaanta iyo wararka tifaftirka. Waxaan jecel nahay inaan ku dhex milmo qoraayaasha qadiimiga ah oo aan wareysano qorayaasha kuwooda ugu caansan sida Wareegga Dolores o Marwaan sidoo kale waafajinta qorayaasha cusub.
Waxaan ku leenahay in ka badan 450.000 taageerayaal Twitter ah koontadeena @A_ suugaan Halka laga keenay
Waxaan jecelnahay inaan uga gudubno dhacdooyinka kala duwan. Laga soo bilaabo 2015 waxaan u soconnay kuwa kale oo ah kuwa sharafta leh Abaalmarinta Planet waanan kaaga warami doonnaa si toos ah iyo gacanta koowaad.
Kooxda tifaftirka ee Actualidad Literatura waxay ka kooban yihiin koox ka kooban khabiiro ku xeel dheer suugaanta, qorayaasha iyo qorayaasha oo lagu abaal mariyay abaalmarino kala duwan. Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto kooxda, waad awoodaa noo soo dir foomkan si aad u noqoto tafatire.
Laga soo bilaabo guridda Manchega ee 70, waxaan u soo baxay aqriste, qoraa iyo aflaanta filimka. Kadib waxaan bilaabay barashada filolojiyada Ingriiska, barida iyo tarjumida luqada Saxon xoogaa. Waxaan ku dhammeeyay tababar sidii hingaad iyo qaab-akhrine loogu talagalay daabacayaasha, qorayaasha iskaashiga ah, iyo xirfadlayaasha isgaarsiinta. Waxaan maareeyaa laba websaydh: MDCA - CORRECCIONES (https://mdcacorrecciones.jimdofree.com/) iyo MDCA - BARO ENGLISH IYO Spanish (https: //mdca-aprende-a-tu-aire-ingles-y-espanol.jimdosite. com /). Waxaan sidoo kale leeyahay degel suugaaneed, MDCA - NOVELAS Y RELATOS https://mdcanovelasyrelatos.jimdofree.com/) iyo baloog, MDCA - QUÉ HAY DE LO MÍO (https://marioladiazcanoarevalo.blogspot.com.es/), halkaasoo Waxaan wax ka qoraa suugaanta, muusigga, taxanaha telefishanka, shineemooyinka iyo guud ahaan arrimaha dhaqanka. Aniga oo aqoon u leh tafatirka iyo qaabeynta, waxaan is-daabacay shan sheeko: "Marie", saddexley taariikhi ah "Yeyda iyo xiddigga" iyo "Bishii Abriil".
Bachelor of Education, sheeg luqadda iyo suugaanta, oo ka socota Udone (Universidad de Oriente, Nucleo Nueva Esparta, Venezuela). Bare jaamacadeed oo kuraasta taariikhda, suugaanta Isbaanishka iyo Laatiin Ameerika, iyo sidoo kale muusigga (wada noolaanshaha iyo gitaarka). Bachelor of Education, sheeg luqadda iyo suugaanta, (Udone). Bare jaamacadeed ee suugaanta, taariikhda iyo muusigga. Waxaan u shaqeeyaa qoraa ahaan, anigoo ku taagan gabayada iyo sheekooyinka magaalooyinka. Buuggayga qaarkood waa: "Transeúnte", sheekooyin; "Xeebaha xeebta", ururinta gabayada. Waxaan sidoo kale u adeegaa sidii abuur abuure iyo tifaftire qoraal.
Tifatiraha iyo qoraa ilaa 2007. Buuga jeclaa ilaa 1981. Tan iyo markii aan yaraa waxaan ahaa qof buugta cuna. Kii igu kalifay inaan caabudo? Nutcracker iyo Boqorka Jiirka. Hadda, ka sokow akhriste, waxaan ahay qoraa sheekooyinka carruurta, dhallinta, jacaylka, sheekooyinka iyo sheekooyinka neceb. Waxaad ii heli kartaa aniga oo ah Encarni Arcoya ama Kayla Leiz.
Waxaan ahay Ana Lena Rivera, oo ah qoraa taxane sheeko xariir ah oo jilaysay Gracia San Sebastián. Kiiskii ugu horreeyay ee Gracia, Lo que Callan los Muertos, wuxuu helay abaalmarinta Torrente Ballester Award 2017 iyo abaalmarinta kama dambaysta ah ee abaalmarinta Fernando Lara 2017. Waxaan aad u jeclaa khayaaliga dambiyada ilaa yaraanteydii, markii aan ka tagay Mortadelo iyo Filemón ee Poirot iyo Miss Marple, markaa dhawr sano ka dib aniga oo maamule ka ah dalal badan oo kala duwan, waxaan ganacsi ugu beddelay hamigayga weyn: Buugga dambiyada. Sidaas ayuu ku dhashay Gracia San Sebastián, oo ah hogaamiyaha cilmibaadhe ee taxanaheyga sheeko-baarista, halkaas oo dadka caadiga ah, sida qofkeen kasta, ay ku noqon karaan dambiilayaal, xitaa dilid markay noloshu geliso xaalad adag. Waxaan ku dhashay Asturias, waxaan haystaa shahaadada Sharciga iyo Maamulka iyo Maareynta Ganacsiga waxaanan ku noolaa Madrid tan iyo maalintaydii jaamacadeed. Waqti ka waqti ayaan u baahanahay inaan urto badda, Cantabrian Sea, xoog leh, firfircoon oo khatar ah, sida sheekooyinka aan kuu soo qoro.
Sida kuwa badan oo ka soo horjeeda, kormeeraha waxbarashada iyo hiwaayadaha badan, oo ay ku jiraan akhriska. Waan ku qanacsanahay faneed wanaagsan laakiin kama xirmayo kooxda markii wax suugaanta ku cusubi gacmahayga ku dhacaan. Waxaan sidoo kale ka mahadcelinayaa ku habboonaanta iyo fudeydka 'ebooks' laakiin waxaan ka mid ahay kuwa doorbida wax aqrinta anigoo dareemaya warqadda, sidii had iyo jeerba la sameyn jiray.
Qoraaga safarka iyo suugaanta, jecel waraaqaha qalaad. Aniga oo ah qoraa khiyaali ah, waxaan ku daabacay sheekooyin abaalmarino ku kala guuleystay Spain, Peru iyo Japan iyo buugga Cuentos de las Tierras Calidas.
Injineer iyo sheekooyinka jecel. Wadadayda suugaanta waxay ka bilaabatay Mariane Curley "The Circle of Fire" waxaana lagu xoojiyay Robin Cook "Toxina". Waxaan leeyahay doorbid khiyaali ah, ha noqoto Da 'yar ama Qof weyn. Dhanka kale, sidoo kale waxaan jeclahay inaan ku raaxeysto taxane wanaagsan, filim ama manga. Wax kasta oo sheeko xambaarsan waa la soo dhaweynayaa. Sidoo kale waxaan ahay maamule mareeg suugaaneed oo aan ku qoro ra'yigayga ku saabsan buugaagta aan akhriyo: http://librosdelcielo.blogspot.com/
Degree Isbaanishka Philology. Xamaasad badan ayaan u qabay qorista, waxaan ka sameeyay Master-ka Qoraal iyo hal abuur. Laga soo bilaabo yaraanteydii waxaan jeclaa suugaanta, marka balooggan waxaad ka heli kartaa talooyinka ugu fiican ee ku saabsan sida loo qoro sheeko-xariiro, ama aad ugu raaxeysatid dib u eegista wanaagsan ee buugaagta caadiga ah.
Waxaan ku dhashay Barcelona bishii ugu dambeysay ee 80. Waxaan ka qalin jabiyay Pedagogy kana soo baxay UNED, waxbarashadana ka dhigtay qaab nololeedkeyga mihnadeed. Isla mar ahaantaana, waxaan isku tiriyaa taariikhyahan "hiwaayad" ah, oo ku waalan barashada waagii hore iyo gaar ahaan khilaafaadka dagaal ee aadanaha. Hiwaayad, kan, oo aan ku daro akhrinta, ururinta buugaagta nooc kasta iyo, guud ahaan, iyo suugaanta dhammaan noocyadeeda kala duwan ee suurtagalka ah. Marka laga hadlayo hiwaayadeyda suugaaneed, waa inaan sheegaa in buugga aan ugu jeclahay uu yahay "The Godfather" oo uu qoray Mario Puzzo, sheekadayda aan ugu jeclahay waa tan Santiago Posteguillo ee loogu talo galay dagaalladii Punic, madaxayga qoraaga waa Arturo Pérez-Reverte iyo tixraacdayda suugaanta waa Don Francisco Gomez de Quevedo.
Waxaan ku dhashay isla maalintaas Amiir Henry ee Ingiriiska. Isagu waa amiir reer England ah aniguna waxaan ahay laybereeri. Thanks Karma. (bilaa acrimony).